Published April 29, 2021 at 6:07 AM CDT
Waaxda Caafimaadka ee Degmada Dakota ayaa ku dhawaaqday qorshayaal xarun caafimaad oo loogu tala galay dadweynaha oo ku taala Koonfurta Sioux berri. Rugta caafimaad waxaa loo qorsheeyay 2 ilaa 6 pm. at El Ranchito oo ku yaal Cornhusker Drive. Rugta caafimaadku waxay u furan tahay dadka deggan Nebraska iyo Iowa labadaba. Diiwaangelinta hore ayaa lagula talinayaa, laakiin looma baahna. Si aad isuqorto tag tallaalka.ne.gov.
Iyada oo xiisaha loo qabo talaalada coronavirus ay ku sii yaraanayaan in badan oo ka mid ah gobolka Iowa, Gov. Kim Reynolds ayaa sheegay in saraakiisha caafimaadka bulshada ay qorsheynayeen in talaal laga dhigo goobaha la isugu keenayo sida suuqyada beeraleyda iyo dhacdooyinka isboorti. Waa qayb ka mid ah dadaalka gudoomiyuhu ku doonayo in 65% ee Iowans la tallaalo illaa bisha May iyo 75% illaa Juun. (Laga soo bilaabo 70% ilaa 85% waxaa la rumeysan yahay inay kufilan tahay in la siiyo xasaanad xoolaad muhiim u ah dadweynaha gobolka.) Iowa waxay si buuxda u talaashay in ka badan 1 milyan oo qof ama seddex meelood meel dadka ka mid ah ilaa Arbacadii.
Dhanka kale, saraakiisha caafimaadka ee gobolku waxay yiraahdaan dhimashada la xiriirta opioid-ka waxay ku korortay 35 boqolkiiba sanadka 2020. Iowa’s surge Muraayadaha isbadalka qaran.
Waxaa jiray 211 dhimasho la xiriirta opioid sanadkii la soo dhaafay, taas oo 54 ka ah 2019.
Diiwaanka Des Moines wuxuu sheegayaa inaysan caddeyn in masiibada ay tahay sababta guud ee kororkaan. Si kastaba ha noqotee, arrimo la xiriira aafada ayaa laga yaabaa inay gacan ka geysteen, oo ay ku jiraan go'doomin iyo yaraynta helitaanka adeegyada daryeelka caafimaadka.
Degmada Dakota waxay ku dartay shan qof oo kale oo u dhinta COVID-19-kii shalay, taasoo wadarta wadarta ka dhigaysa 76. Gobolka Woqooyi-bari Nebraska…